शेयर बजार Archives - नेपाल कुरा
शेयर बजार गृहपृष्ठमा जानुहोस् :
शेयर बजारमा करेक्शन हुँदा बैंकिङ समूह घट्यो, ५ कम्पनीको सकारात्मक सर्किट
काठमाडौँ । आज (सोमबार) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) घटेको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक ३०५८.६३ विन्दुमा पुगी अलटाइम हाई रेकर्ड बनाएको थियो । आज नेप्से ८.२४ अंकले घटेर तीन हजार ५० दशमलब ४३ विन्दुमा बन्द भएको छ । त्यस्तै आज[…..]
ऐतिहासिक उचाईमा शेयर बजारः १४ अर्ब ३० करोडको कारोबार
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०७८, आईतवार July 26, 2021 , संवाददाता: Yukta
काठमाडौं । कारोबारको पहिलो दिन आज (आइत्बार) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) उच्च अंकले बढेको छ । आज नेप्से ५४.३१ अंकले बढेर तीन हजार ५८ दशमलब ३१ विन्दुमा पुगेको हो । त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि उछाल आएको छ । आज[…..]
खारेज हुने कम्पनीबाट सेयरधनीहरुलाई कसरी रकम दिइन्छ ?
काठमाडौँ । अदालतले कम्पनी खारेजीमा लैजाने फैसला गरेको अवस्थामा लिक्युडेटर पनि तोकिदिएको हुन्छ । लिक्युडेटरले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा बिक्री गर्न सहयोग गर्दछ । यसरी बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट सर्वप्रथम कम्पनी खारेज गर्दा लाग्ने खर्च, कर्मचारीहरुको तलब तथा सुविधाहरु, सरकारी[…..]
शेयर बजार ३००० बिन्दु माथि ! ११ अर्ब माथिको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज (विहीबार) नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । आज बजार १८ दशमबल ७६ अंकले बढेर बन्द भएको हो । शेयर बजारको सूचकांक ३ हजार ४ दशमबल ३३ अंकले बढ्दा बजारमा ११[…..]
काठमाडौं । मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीले यही साउन १४ गतेदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गएको असार २३ मा कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँअंकित मूल्यमा सात करोड[…..]
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा आज मंगलबार नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । आज नेप्से ९.१ अंकले घटेर दुई हजार नौँ सय ८५ दशमलब ५७ विन्दुमा थामिएको छ । त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ ।[…..]
भोलि बकर इद ! सेयर बजार पनि बन्द हुने
काठमाडौँ । धितोपत्रको दोश्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) भोलि (बुधबार) बन्द हुने भएको छ । सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व बकर इदको अवसरमा भोलि श्रावण ६ गते सार्वजनिक बिदा[…..]